Nanomboka Tambajotra Ho Fiarovana an-Tserasera Ho An’ny Mpanao Gazety ny (DRF) Fikambanana Momba ny Zo Nomerika ao Pakistàna. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2018 2:36 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, русский, Español, polski, English
Fivorian'ireo Vehivavy tao amin'ny Fampiofanana nohafainganina nampanaovin'ny DRF momba ny Fiarovana an-tserasera. Sary nalain'ny DRF, nahazoana fahazoandàlana.
Ny herinandro lasa teo, nanomboka ny “Tambajotran'ny mpanao gazety ho an'ny zo dizitaly” ny Digital Rights Foundation (DRF), fikambanana tsy mitady tombontsoa iray miasa ho an'ny zon'ny dizitaly ao Pakistan. Ny hanampy ireo mpanao gazety hilamina rehefa miasa an-tserasera, amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo fitaovana sy fampiofanana, no tadiavin'ilay tambajotra.
Mitady mpikambana vaovao ilay tambajotra mba hanomezana antoka fa mieritreritra ny momban'ny fiarovana nomerika ireo mpanangona vaovao manerana ny firenena ary nomena ny fitaovana mba hanampy azy ireo hanao ny asany am-pilaminana kokoa.
Natrehan'ny andiana roa misy vehivavy mpanao gazety ampolony mahery avy any amin'ny firenena manontolo ilay tambajotra natomboka taminà roa andro fiofanana momba ny fiarovana nomerika. Any amin'ny laharana faha 147 amin'ny 180 maneran-tany i Pakistan amin'ny “Tondron'ny Fahalalahan'ny fanaovana Gazety 2016“, fampilaharana nataon'ireo Mpitatitra Tsy Voafetran-tSisintany (RSF). Nanamarika ny RSF fa “Kinendrin'ireo vondrona mpanao an-tendrony, Islamista ary ireo Fikambanana mpitsikilo ao Pakistana ireo mpanao gazety”.
Ny olana mianjady amin'ireo vehivavy mpanao gazety dia miainga avy amin'ny fampitahorana any amin'ny toerana iasana mankany amin'ny fampihorohoroana sy fandrahonana noho ny fanadihadiana ataon-dry zareo. Ny taona lasa teo, tamin'ny resaka fakankevitra momba ireo Fanamby ho an'ny fiarovana ny Vehivavy matihanina amin'ny Media, niteny momba ny tsy fisian'ny rafitra voapetraka hanampy any an-toerana ireo mpanangona vaovao, mba hanampy amin'ny tranga sotasota ara-nofo any amin'ny toeram-piasana. Nantsoin'ireo mpitarika ny fihaonana ireo fikambanana mpilaza vaovao mba hijery ny fitsipi-pitondrantena napetraka mba hiatrehana ireo olan'ny sotasota miaraka amin'ireo trano famoahambaovao ary hametraka taridàlana avy hatrany
Manantena ny anome ireo mpanao gazety fahafahana hampihatra sy hampiroborobo ny fiarovana an-tserasera ilay tambajotra, ary mba hampitombo ny fampitandremana momba ny olana eo amin'ny zo nomerika any amin'ny media mahazatra.
Vakio ihany koa: Manjavona ireo Mpihetsiketsika ara-nomerika ao Pakistan (Ang)
Fandrahonana an-tserasera ao Pakistan.
Tamin'ny taona 2016, nanomboka voalohany ny antso an-tariby nasionaly ho an'ny sotasota an-tserasera ny Digital Rights Foundation (DRF), tolotra maimaimpoana iray manome torohevitra momba ny lalàna, fanohanana ara-piarovana nomerika, ary torohevitra ara-tsaina ho an'ireo niharan'ny sotasota ara-tserasera.
Mamoaka tatitra matetika ny DRF amin'izao, momba ny antony sy ny halalin'ny sotasota an-tserasera ao Pakistan, miankina amin'ireo zavatra hitan'ny mpiasa ao amin'ilay antso an-tariby:
Raha araky ny zavatra hitanay tao anatin'ny volana efatra voalohany tamin'ilay hetsika, naharay fitarainana 513 ilay tambajotra fanampiana. 563 no fitambaran'ireo antso, ny 406 tamin'ireo dia tranga manokana. Vehivavy no nanao ny 62%, ary ny 37%-n'ny mpiantso dia lehilahy. Ny tambajotra izay tena ahitana sotasota indrindra dia hita hoe ny Facebook ka ny fitarainana dia momba ny kaonty fako, ny fampiasana ireo vaovao amin'ny tsy tokony ho izy, ny imailaka mainty, ireo hafatra tsy iriana sy ireo kaonty na fitaovana voajirika. Ny betsaka amin'ireo tranga voaray dia avy any Punjab (41.3%) ary ny 23,90% tsy manambara ny toerana misy azy. Mahazo antso avy any amin'i Sindh (17.8%) ihany koa ilay mpanampy an-tserasera, Khyber Pakhtunkhwa (4.70%), Balochistan (1.30%), Azad Kashmir (0.70%), Faritany Federaly (10.10%) ary ivelan'i Pakistan (0.20%).
Napetraka any amin'ny Fahefana ho an'ny Fanadihadiana Federaly (FIA), fahefam-panjakana tomponandraikitra amin'ny fiatrehana ny heloka bevava atao an-tserasera, ireo tranga voatatitra any amin'ilay mpanampy an-tserasera.
Fahalalaham-pitenenana an-tserasera any Pakistan
Na eo aza ny Lalàna momba ny heloka bevava atao an-tserasera hiatrehana ny sotasota an-tserasera ao pakistan, lazain'ireo fikambanana mpiaro ny zo nomerika fa ampiasaina ireny lalàna ireny hamelezana mpikatroka, blaogera, ary mpanao gazety izay mampiasa ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto hanehoana hevitra manohitra ny fanjakàna sy ireo sampan-draharaha misahana ny filaminana.
Na eo aza ireo sakana, ilay tambajotra dia nampiroborobo ny fanantenana vaovao hoe amin'ny alalan'ny fampivondronana ireo mpanao gazety sy ny fampitomboana ny fahafantarana ny olan'izy ireo, dia afaka mifanampy izy ireo mba ho voaaro an-tserasera, miady amin'ny filam-baniny an-tserasera ary mitatitra amin'ny fomba mahomby ireo olana momba ny fiarovana an-tserasera.
Nandray anjara tamin'ny fivoriana fanombohana ilay tambajotra ny mpanoratra Anushe Noor Faheem.